Maxay labada dal uga dhigan tahay heshiiskii Farmaajo iyo Uhuru? | Somaliland Mirror
Home Uncategorized Maxay labada dal uga dhigan tahay heshiiskii Farmaajo iyo Uhuru?
Maxay labada dal uga dhigan tahay heshiiskii Farmaajo iyo Uhuru?
Admin 2Nov 16, 2019Uncategorized, WARARKA0
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhiggiisa Kenya, Uhuru Kenyatta, kula kulmay magaalada Nairobi, waxayna ka wadahadleen sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka labada dal ee sii xumaanayay sannadihii la soo dhaafay.
Khilaaf soo jiitamayay oo ka dhashay muranka xuduudda badda ayaa u dhexeeyay labada dowladood, kaas oo laga warsugayo in maxkamadda Cadaaladda caalamiga ah ee ICJ ay go’aan ka gaarto.
Shir jaraa’id oo si wadajir ah ay ugu faah-faahiyeen qodobbada ay isla meel dhigeen, ayey ku qabteen magaalada Nairobi. Waxay sheegeen in ay ku heshiiyeen qodobbo ay ka mid yihiin; in duullimaadyadii tooska ee Muqdisho iyo Nairobi la soo celiyo iyo arrimaha badda ee kiiska ICJ.
“Run ahaantii waxay iila muuqataa arrin horumar leh, maadaama ayaamihii ugu dambeeyay ay aad u cakirnayd xiriirka labada dal”, ayuu yiri Xuseen Axmed Geelle (Sandhool) oo ka fallooda arrimaha siyaasadda Bariga Afrika.
Arrinta muranka xuduudda badda oo sal u ah khilaafka ayaa sabab u ahaa inuu xiriirka xumaado, heshiisyadii horey looga gaarayna ma aysan keenin “xal waara oo dhab ah”. Balse hadda waxay filayaan “in xiriirka uu wanaagsanaado”.
“Waxaan maalmihii uu shirkaas socday helnay fursad aan isku aragno walaalkey ugana wadahadalno arrimo la xiriira labadeenna dal, waxaana ku khasbanahay inaan u mahadceliyo walaalkey, sababtoo ah waxaan yeelannay wadahadallo mira-dhalay,” ayuu yiri Uhuru Kenyatta.
“Nasiib darro dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay waxaa na dhex yaallay arrimo wax u dhimay xiriirkeenna, laakiin maanta waxaan isku waafaqnay aniga iyo walaalkey inaan u baahannahay inaan sidii caadiga ahayd kusoo celinno xiriirkeenna”, ayuu hadalka ku sii daray.
Sida lagu daabacay bogga telefishinka Qaranka ee Soomaaliya (SNTV), qodobbada lagu heshiiyay waxay kala ahaayeen:
Sandhool ayaa sheegay: “Dadaal weyn ayey dowladda u gashay in ay arrintaas soo celiso. Dhibaatooyiin iyo carqalado jiray oo la isku haystay ayaa (sababay) in maalinba malinta ka dambeysa ay ka sii darto. Laakiin hadda waxaa filayaa in ay ka waantoobayaan dhibtii faraha badnayd ee la isku hayay ayna yara degeyso”.
Previous PostAgaasime Doonayay Inuu Is Qarxiyo Oo Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho. Next PostXaaladda Muddo Kordhinta Guurtidu U Sameynayso Baarlamaanka IyoWarkii Ugu Dambeeyay